नेप्से ६ अंकले बढ्यो, कारोबार भने साढे ३७ करोडको मात्र
लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजारमा कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उकालो लागेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएदेखि नै ओरालो लागेको परिसूचक बिहीबार भने करिब ६ अंकले वृद्धि भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ५.९० अंकले बढेर एक हजार २६४.३६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीका कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १.०८ अंकले वृद्धि भई २७१.६० बिन्दुमा पुगेको छ ।
परिसूचक उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने सस्तैमा समेटिएको छ । कुल १७१ कम्पनीका १३ लाख ७५ हजार ५४१ कित्ता सेयर रु. ३७ करोड ५३ लाख १५ हजार २०४ मा खरिद–बिक्री भए । स्टकका अनुसार कारोबार भएका कुल ११ उपसमूहमध्ये तीन उपसमूहको सेयर घटेको छ । वित्त ०.३९, निर्जीवन बिमा ७.६६ र उत्पादन १२.८८ अंकले घटेका छन् ।
लघुवित्त र होलेट उपसमूहका सेयरमा भएको वृद्धिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । यस्तै, बैंकिङ ६.९, होटेल ८.४४, विकास बैंक ५.०१, जलविद्युत् ७.०४, अन्य ४.२६, लघुवित्त १३.६८, जीवन बिमा ३.५८ र सामूहिक लगानी कोष ०.०२ अंकले वृद्धि भएको छ ।
स्टकका अनुसार बिहीबार कारोबारका आधारमा शिवम् सिमेन्ट अग्रस्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको रु. तीन करोड तीन लाख १३ हजार २९९, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंक रु. दुई करोड ६४ लाख दुई हजार ६५५, नेपाल बैंक लिमिटेड रु. दुई करोड ४० लाख १२ हजार २५४, प्रभु बैंक रु. एक करोड ९८ लाख पाँच हजार ७०१, मेगा बैंक एक करोड ६६ लख ४३ हजार ३२३ र एनआईसी एसिया बैंकको रु. एक करोड ४२ लाख ७३ हजार ७७५ मा खरिद–बिक्री भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
बढेको बजारमा रिलायन्स फाइनान्सका सेयरधनीले ५.२६, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ३.२२, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स २.१७, युनिलिभर नेपाल १.९९ र सिटिजन म्युचुअल फण्डका लगानीकर्ताले १.९३ प्रतिशतले गुमाए । यस्तै गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले ९.८७ प्रतिशतले कमाए । मल्टीप्रपोज फाइनान्स ९.७७, खानीखोला हाइड्रोपावर ७.३५, स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.०३, एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ५.८९ र पाँचथर पावर कम्पनीका सेयरधनीले ५.८० प्रतिशतले कमाए ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा बिहीबार विभिन्न तीन कम्पनीका सेयर सूचीकृत भएका छन् । मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ३२ लाख ८९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तीन लाख २९ हजार ८८९ कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत भयो ।
स्टकमा जेविल्स फाइनान्स लिमिटेडका तीन लाख ४० हजार ९५५ कित्ता हकप्रद र तीन लाख ८९ हजार २८१ कित्ता सेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ ।